My World: တစ္ဆေတွေကို ကျွန်မချစ်တယ်
Posted by PhyoPhyo at Monday, July 15, 2013 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ
တစ္ဆေတွေကို ကျွန်မ ချစ်တယ်။
ဒီလို ပြောလိုက်ရင် ကျွန်မကို အရူးအနှမ်းတစ်ယောက်လို အားလုံးက မျက်လုံးကြီးတွေပြူး၊ အောက်မေးရိုးတွေ ပြုတ်ကျသွားပြီး တအံ့တသြကြီးကို ၀ိုင်းအုံကြည့်ကြမှာ သေချာတယ်။ တကယ်ပြောတာ။ တစေ်္ဆတွေကို ကျွန်မ တကယ်ပဲချစ်ပါတယ်။
“တစ္ဆေတွေကိုချစ်ရတယ်လို့ ဘယ့်နှယ် ကြံကြီးစည်ရာကွယ်" လို့ လူကြီးသူမ လေသံကြီးနဲ့ ကျွန်မကို ရှင်တို့ နှာခေါင်းရှုံ့ကြမှာ သေချာတယ်။ “လူတိုင်းက ကြောက်စရာလန့်စရာလို့ ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ တစေ်္ဆကို သူကများ ချစ်စရာတဲ့၊ အဲဒါ တမင်သက်သက် စတန့်ထွင်တာ၊ လူစိတ်ဝင်စား အောင် လျှောက်ပြောတာပါ” လို့ ရှင်တို့စိတ်ထဲ မြည်တွန် တောက်တီး လုပ်ချင်ကြမှာပဲလို့ ကျွန်မ နားလည်ပါတယ်။
ပြောရရင် တစေ်္ဆတွေမှာ ကျွန်မ သဘောကျတဲ့အရည်အချင်းတွေရှိ တယ်။ သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို ကျွန်မတို့လူသားတွေ ဘယ်တော့မှ လိုက်မမီနိုင်ဘူး။ တစေ်္ဆတွေက သူတို့ကို မြင်စေချင်တဲ့သူဆို ပေးမြင်နိုင်တယ်။ မမြင်မတွေ့ စေချင်တဲ့သူဆို ဒိုင်လျှိုလေးနဲ့ အသာလေးပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး နေလို့ရတယ်။ သူတို့က ၀ါဂွမ်းတစ်စ ငှက်မွေးတောင်လေးတစ်စလို ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေးပဲ၊ ဟိုသွားသည်လာ တစ်ခဏချင်းကူးသန်းလို့ရတယ်။ ကိုယ်ခန်္ဓာ အတိအကျ မရှိတော့ ကရိကထမများလှဘူး။ ကျွန်မတို့လူသားတွေလို ရေချိုးရ၊ အ၀တ် အစားဝတ်ရ၊ ဖြီးလိမ်းပြင်ဆင်ရ၊ ရေမွှေးဆွတ်ရ ဘာတစ်ခုမှ သူတို့လုပ်စရာ မလိုဘူး။ ဘယ်လောက်နားအေးသလဲ။
ကျွန်မဆိုရင် ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေရတာ။ အမြဲတမ်းပဲ ဆံပင်ညှပ်တော့မယ် စိတ်ကူးပြီး Beauty saloon ထဲဝင်လိုက်ပါ တယ် ဟာ . .ဒီဆံပင်ညှပ်ခ နှမြောပါတယ် ဆံပင်မညှပ်တော့ဘဲ စာအုပ်ဝယ် ဖတ်လိုက်တာမှ အကြာကြီး ဖတ်ရသေး ဆိုပြီး ပြန်ပြန်ထွက်လာတာနဲ့ပဲ ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်တွေက ခုတလော ရှည်ရှည်လာတော့တာ။ အိမ်အလုပ် လုပ်မယ်ဆို ထုံးရဖွဲ့ရ၊ အပြင်ထွက်မယ်ဆို စည်းရနှောင်ရ၊ အင်္ကျီအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဖဲကြိုးဆံညှပ်တွေ ရွေးချယ်ရနဲ့ အို . .ရှုပ်နေတော့တာပဲ၊ ဒီဆံပင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကို။
အခုပဲ တစေ်္ဆကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောမလုိ့ပါဆို၊ ဆံပင်က ၀င်ရှုပ်ပြန်ပေါ့။ကျွန်မ မညာပါဘူး။ တကယ်ပြောတာ။ တစေ်္ဆတွေကို ကျွန်မချစ်တယ်။ချစ်တယ်ဆိုမှတော့ ယုံကြည်လို့ချစ်လို့ရတာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ ရှင်တို့ စဉ်းစားကြည့်။ ရှင်တို့စိတ်ထဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်စိတ် ၀င်ပြီဆိုရင် အဲဒါ ယုံကြည်စိတ်က စတင်မြစ်ဖျားခံတဲ့အရာပဲလို့ ကျွန်မ တပ်အပ်ပြော လိုက်မယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတာ။ တစေ်္ဆတွေကို ကျွန်မချစ်တယ် ဆိုတာ အကြောင်းမဲ့ အလဟသကြီး စတန့်ထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လို့။ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ လက်ခံလို့။ လက်ခံတယ်ဆိုတာ သူတို့ တကယ်ရှိနေလို့။ တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ တကယ် မြင်ရလို့။ ဒီလို ဒီလို။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ပြန်ပြောင်းချိတ်ဆက်ပြီး ပြောပြရဦးမယ်။
ကျွန်မက ငယ်ငယ်တုန်းက အဘွားရဲ့အသည်းစွဲ သတိ်္တခဲ။ ကျွန်မရဲ့ အဘွားကတော့ ကျွန်မနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်၊ တစေ်္ဆဆို သိပ် ကြောက်တတ်တဲ့သူ။ ညည အဘွား အိမ်သာသွားချင်ပြီဆို ကျွန်မကို နှိုးလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မက အဘွားရှေ့ကနေ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးထိုးပြီး ဦးဆောင်ပြီး ခေါ်ခေါ်သွားတာ။ကျွန်မအစ်ကိုကြီးဆိုရင်လည်း ယောက်ျားတန်မဲ့ တစေ်္ဆကြောက်လိုက်တာမှ လွန်ပါရော။ လူပျိုပေါက်ပဲဖြစ်နေပြီ၊ ညမှောင်ရင်ကြောက်တုန်း။ သူဘယ် လောက် အပြင်ထွက်လည်လည် မမှောင်ခင် မိုးမချုပ်ခင် အိမ်ကို အမြဲပြန် လာလေ့ ရှိတယ်။ အဲ . .အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် နောက်ကျပြီဆိုရင်လည်း သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်က အမြဲအိမ်ပြန်ပို့ပေးရတယ်၊ အဲဒီ လောက်ထိ။ အဘွားလည်း ဘာထူးသေးလဲ။ တစေ်္ဆမဆိုထားနဲ့၊ တစေ်္ဆမဖြစ် ရသေးတဲ့ ပူပူနွေးနွေးလူသေကိုတောင် ကြောက်လိုက်တာမှ ဆတ်ဆတ်ကို တုန်နေတာပဲ။
ဘယ်လောက်တောင်မှ ကြောက်တတ်သလဲဆိုရင်၊ လမ်းမှာ အသုဘ တစ်ခုက ငိုသံတွေ စီခနဲစီခနဲ၊ ကြေးစည်ကို နှောင်ခနဲ နှောင်ခနဲ တီးပြီး အိမ်ရှေ့ကနေ ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် အို . .တစ်အိမ်လုံး ရှိရှိသမျှ တံခါးတွေကို ပြေးပြေးပြီးတော့ကို လိုက်ပိတ်တော့တာ။ တစ်ယောက်တည်း ဗရုန်းသုန်းကား ကို ဖြစ်လို့။
သူ့ပါးစပ်ကလည်း “ဟဲ့ . .ပိတ်ကြပါဟဲ့၊ ပိတ်ကြပါဟဲ့ ဟိုမှာ လာနေပြီ” ဆိုပြီး အလန့်တကြားလေသံကြီးနဲ့ အော်နေလိုက်သေးတာ။ အဲဒီမှာ သူ့လို ပျာကလောင်မဖြစ်ဘဲ ငြိမ်နေတဲ့အဖေ့ကို “ဟဲ့ ပိတ်ပါဆို၊ ဘာကြောင်ကြည့် နေတာလဲ၊ ဟိုမှာ နင့်အမေ အသုဘက လာနေပြီ”ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆို အဖေ့ခေါင်းကို ထုသွားလိုက်သေးတာ။ အဖေက အဘွားမမြင် အောင် မျက်နှာကိုကွယ်ပြီး အမေ့ဆီ မျက်စပစ်လို့ တအစ်အစ်ခိုးရယ်တော့တာပေါ့။“နင့်အမေ အသုဘ”ဆိုတဲ့စကားကြီးကိုလေ။ အဖေက အဘွားရဲ့သား မဟုတ်လား။ သူ့စကားဘယ်လောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိ၊ အဲဒီအဘွားက တော့လေ . . .။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မတို့ ကလေးကိုလည်း ကြောင်မကြီးက ကြောင်ကလေးတွေကို လည်ကုပ်ကနေကိုက်ချီသလို သူ့ပါးစပ်နဲ့ကိုယ်တိုင် ကိုက်မချီရုံတစ်မည်ပါပဲ ကျွန်မတို့ကို ကုပ်ကနေ ဆွဲကုပ်ခေါ်ပြီး အိမ်ထဲ သွင်းထည့်တော့တာပဲ။
ကျွန်မက အဘွားကို စချင်တာနဲ့ “အဘွား၊ တစေ်္ဆက အဘွားခုလို တံခါးပိတ်တာလောက်တော့ အပျော့ပဲ။ မီး ကြည့်တဲ့ကာတွန်းကားထဲကလို ကိုယ်ကို ပျော့ပျော့စိစိကြီးလုပ်ပြီး ဟော့သလို ဟော့သလို တံခါးကိုလျှောခနဲ ထွင်းဖောက်ဝင်တတ်တယ်”လို့ ပြောပြီဆိုရင် ကျွန်မခေါင်းတော့ ဂေါက်ခနဲ မြည်သွားတော့တာပဲ၊ အဘွား ခေါက်ထည့်လိုက်တာလေ။ အနာခံပြီးတော့ကို ကျွန်မက တမင်သက်သက် အဘွားကို စတာ။ ဒါပေမဲ့ အဘွားတကယ် ကြောက်တတ်မှန်းသိတော့ ညဘက်ဆိုရင်တော့ အဘွားကို မစပါဘူး။ အခုလည်း အသုဘဖြတ်သွားပြီးလို့ အိမ်ရှေ့ကနေ စီစီနှောင်နှောင် အသံတွေ တိတ်သွားပြီဆိုမှ အဘွားက အိမ်တံခါးတွေကို လိုက်ဖွင့်တော့တယ်။
အဲဒီဗရုန်းသုန်းကားအခြေအနေ ပြီးဆုံးသွားတော့မှပဲ အဖေရယ် အမေရယ်ကျွန်မတို့မောင်နှမသုံးယောက်ရယ် စောစောက အဘွားလွှတ်ခနဲ ပြောလိုက်တဲ့ “နင့်အမေအသုဘ”ဆိုတဲ့ စကားကြီးကို တဟားဟားနဲ့ပြန် ပြောရင်း ရယ်ပွဲဖွဲ့ကြတော့တာ။ အမလေး . .အနားမှာ အဘွားရှိနေရင်တော့ ဒီလိုဘယ်ရယ်ရဲပါ့မလဲ။ အဘွားက စိတ်ကောက်တတ်တယ်။ သူကောက်ပုံ က ကလေးတော့ဆန်မယ်ထင်တယ်။ ထမင်းမစားဘဲ နေခြင်းအားဖြင့် သူကောက်ကြောင်းကို ပြတာ။ အဘွားထမင်းမစားမှာ စိုးတာနဲ့ပဲ သူ့ကို ကျွန်မတို့ စိတ်ကောက်အောင် မလုပ်ရက်ကြပါဘူး။
တစေ်္ဆလို့ ဆိုလို့မရတဲ့ နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကို ကျွန်မ မြင်ဖူးတယ်။ အိုက်စပ်စပ်နွေညခင်းတစ်ခင်းမှာပေါ့။
ညကိုးနာရီလောက်မှာ အဘွားက ကလေးပီပီ စောစောမအိပ်သေးတဲ့ ကျွန်မကို အိမ်ရှေ့သရက်ပင်ကြီးအောက်က ကွပ်ပျစ်လေးမှာ ပုံပြင် ပြောပြနေတယ်။ ကျွန်မက တင်ပျဉ်ခွေ ယှက်ထိုင်နေတဲ့ အဘွားပေါင်ပေါ် ခေါင်းတင်အုံးပြီး သရက်ပင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်၊ ကောင်းကင်က ကြယ်လေး တွေကိုကြည့်လိုက်နဲ့ ပုံနားထောင်နေပါတယ်။ အဲဒီမှာ သရက်ပင်ခွကြားလို့ ပြောမလား၊ ကိုင်းကြားလို့ပြောမလား အဲဒီနေရာ နားကနေ လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကို ကျွန်မလှမ်းမြင်တယ်။ ပထမတော့ ကျွန်မလိုပဲ အိပ်မပျော်သေးတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ကောင် ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါသေးတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီအရာဆီက ပြူးဝိုင်းနေတဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ကျွန်မ မြင်တယ်။ ဒါနဲ့ စိတ်ထဲ ဇီးကွက်တစ်ကောင်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပြန်ရော။ ထင်လည်းမထင်ပြန်ဘူး၊ ဇီးကွက်မျက်လုံးကို ကျွန်မကောင်းကောင်းသိ တာပေါ့။ ၀ိုင်းပြီးကြီးမယ့်သာကြီးတာ၊ ရှေ့ကို ဒီလို ငေါထွက်ပြီး လှုပ်စိလှုပ်စိ မှ မနေတာ။
အခုမျက်လုံးတွေက ခုပဲမျက်အိမ်ကနေ ကျွတ်ထွက်တော့ မလိုလို လှုပ်နေတာလေ။ နောက်တော့ သူ့ဆီက ခြေထောက်နဲ့တူပါရဲ့ တွဲလောင်း ပြုတ်ကျလာတယ်။ နောက်တော့ အဲဒါကို လက်နှစ်ချောင်းလို့ ကျွန်မ ထင်မိပြန်ရော။ သိပ်တော့မသဲကွဲဘူး။ လက်လားခြေလား မသဲကွဲတဲ့အရာ။အဘွားပြောနေတဲ့ပုံပြင် ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်မှန်း မသိတော့ဘဲ သစ်ပင်ပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့အဲဒီအရာကို ကျွန်မ စူးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ပြူးငေါလှုပ် မျက်လုံးနှစ်လုံး အောက်က ပါးစပ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာက ပြဲပြဲကြီးဟသွားတယ်။ ပြီး လျှာလို့ထင်ရတဲ့ အရာကြီး လျှောခနဲ ထွက်ကျ လာတယ်၊ ကျွန်မအဘွားသိပ်ကြိုက်တဲ့ အရှည်ဆုံးကြောင်လျှာသီး ထက် တောင်မှ ရှည်ဦးမယ်၊ ရှည်ရှည်ကြီးတစ်ခု ထွက်ကျလာတယ်။ အဲဒါကြီးက လိပ်ခွေဝင်သွားလိုက် ပြန်လျှောပြီးထွက်ကျလာလိုက်နဲ့။
အဲဒီနေရာက အသံတစ်ခုလည်းကြားတယ်။ ဒါကိုတော့ ဘယ်လို အသံလဲ ကျွန်မပြန်မပြောပြတတ်ဘူး။ သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း လှုပ်ရွနေ တာပဲ။ ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူး။ ကြည့်ရတာ သူအဲဒီမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ကို သိမြင်စေချင်လို့ ရှိသမျှအားအင် အစွမ်းကုန် ထုတ်ပြီး ပြသနေသလိုပဲ။ လျှာရှည်ရှည်ကြီးကလည်း လိပ်ဝင်သွားလိုက် လျှောကျလာလိုက်နဲ့ တစ်ခါ ထက်တစ်ခါ ပိုပိုရှည်ပြီး ထွက်ကျလာသလိုပဲ။ အဲဒါ ကျွန်မကို ပြောင်ပြနေ တာလား။ ဘာမှန်းမသိပေမဲ့ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျွန်မ ပျော်လာတယ်။
ကျွန်မ ကိုင်ကြည့်ချင်လာလို့ လက်နဲ့ လှမ်းလှမ်းကိုင်ဆွဲတယ်။ ကျွန်မက လှမ်းအဆွဲ အဲဒါကြီးက လိပ်ဝင်သွားနဲ့ ဆွဲတမ်းတို့တမ်း ကစားနေရသလို ပဲ။ မမိမိအောင် ဆတ်ခနဲ ကျုံးထပြီးအားကုန်လှမ်းဆွဲလိုက်တာ အဲဒီအရာက ကျွန်မ မပြောတတ်တဲ့အသံတစ်မျိုး စူးခနဲအော်ဟစ်ပြီး ပျောက်သွားပါလေ ရော။ အဘွားက “အမလေး ကွိကွကွကွ”လို့အော်ပြီး ဘာဖြစ်တာလဲ မေး တယ်။ ကျွန်မကလည်း ကျွန်မမြင်တဲ့အရာကို အစအဆုံးပြောပြလိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ ဆော့ကစားနေတာကိုပါ ပြောပြလိုက်တော့။ အဘွားခမျာ ခေါင်းမီး တောက်ပါလေရော။ အိမ်ထဲအမြန်ဝင်ကြပြီး ကျွန်မကို ဘုရားစင်ရှေ့ခေါ်ထိုင် ခိုင်းပြီး ဘုရားစာတွေရွတ်ပါလေရော။ “နာနာဘာဝမကောင်းဆိုးဝါးအကောင် တွေ ငါ့မြေးကို ဒုက္ခမပေးကြနဲ့၊ ငါ့ခြံထဲက အခုထွက်သွားကြ” လို့လည်း ပြောသံကြားတယ်။
“အဲဒါက မီးကို ဘာမှဒုက်္ခမပေးပါဘူးအဘွားရဲ့၊ မီးတို့ဆော့နေတာ ပျော်တောင် ပျော်သေး”လို့ ကျွန်မက ၀င်ပြောတော့ ရင်ဘတ်စည်တီးနဲ့ “အမလေး ငါ့မြေးလေး အပမီပါပြီ”တဲ့။
အဘွားပြောတာ ကျွန်မနားမလည်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အဲဒီအဖြစ်ကနေ သင်ခန်းစာကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်။ တကယ်ဆို ကျွန်မက တကယ်ရှိ တာကို တကယ်တွေ့တာ၊ တကယ်တွေ့တာကို မြင်တဲ့အတိုင်း အမှန်အတိုင်း ပြောမိတာ။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ရိုးရိုးကလေးမမြင်ဘဲ ယုန်ထင်ကြောင် ထင် ချဲ့ကားယူကုန်တော့ မလိုအပ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားလာပြီး ရလဒ်တွေ က မလှတော့ဘူးပေါ့။
နောက်တစ်နေ့မှာ အဘွားရဲ့တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်နဲ့ အဲဒီသရက်ပင် ကြီးကို ခုတ်လှဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အရပ်လောက် ငုတ်တိုလေးသာ ကျန်တော့တဲ့ အဲဒီအပင်ကြီးရှေ့မှာ ကျွန်မစူးစူးဝါးဝါးငိုပါတယ်။
သရက်ပင်ကြီး သေသွားပြီးဆိုပြီး အပင်ကြီးကိုသနားလို့ ကျွန်မငို ပါတယ်။
ဖေဖေက သရက်သီးသိပ်ကြိုက်သူ၊ အကင်းလေးကစပြီး မှည့်ဝင်းတဲ့ အထိ နေ့တိုင်း ငါးပိရည်နဲ့ တို့စားလေ့ရှိတော့ ဖေဖေသရက်သီးဝအောင် မစားရတော့ဘူး လို့ စဉ်းစားမိပြီး ဖေဖေ့ကိုသနားလို့ ကျွန်မငိုပါတယ်။ သရက်သီးတွေပေါ်တဲ့ရာသီဆို အိမ်နီးချင်းတွေကို ဖောဖောသီသီ ပေးနိုင်လို့ မေမေလည်း မျက်နှာပွင့်လန်းရသူပါ၊ အခု မေမေမျက်နှာပွင့်လန်း ခွင့်မရတော့ဘူး လို့ စဉ်းစားမိပြီး မေမေ့ကို သနားလို့ ကျွန်မငိုပါတယ်။ အဘွားက ဒီသရက်ပင်အောက် က ကွပ်ပျစ်လေးမှာ ထိုင်ရတာ သိပ်ကြိုက်သူပါ၊ နွေရာသီတိုင်း အရိပ်အေးအေးလေးရတဲ့ သရက်ပင်အောက် က ကွပ်ပျစ်လေးမှာမထိုင်ရတော့ဘူးလို့ စဉ်းစားမိပြီး အဘွားကို သနားလို့ ကျွန်မ ငိုပါတယ်။
ပြီးတော့ ဟို . .ဘာမှန်းမသိတဲ့အကောင်လေးကိုပါ သရက်ပင်ကြီး မရှိတော့ သူဘယ်နားမှာ သွားနေမှာပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားပြီး သူ့ကို သနားလို့ ငိုပါတယ်။
ငါသာ မပြောဘဲထားရင် ဒီအပင်ကြီးဒီလိုငုတ်တိုဘ၀ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စဉ်းစားမိတော့လည်း နောင်တတွေရလို့ ကျွန်မအတွက် ကျွန်မငိုပါတယ်။ အဲဒီလို အားလုံးအတွက် စဉ်းစားမိပြီး ငိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မ တစ်နေကုန်တစ်နေခန်း အကြာကြီးမှ အကြာကြီးတရစပ် ငိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဘွားက တစ်စခန်းထပြန်ပါတယ်။ ငါ့မြေး ဒီလောက်ငိုလှတာ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီး အ၀တ်ဖြူတွေဝတ်ထားတဲ့ ဘိုးတော် ဆရာလို့သူတို့ခေါ်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ခေါ်လာပြီး ကျွန်မကို တွတ်တွတ် မြည် မန်းမှုတ်ထားတဲ့အရည်တွေတိုက်တယ်။ အိပ်ခိုင်းတယ်။ “ဟိုအကောင် လေးမှာနေစရာမရှိတော့ဘူး၊ မီးအခန်းထဲခေါ်ထားမယ်” လို့ စိတ်ထဲသနားမိတဲ့ အတိုင်းပြောတော့ ပိုဆိုးပါလေရော။ “တွေ့လား သေချာပါပြီသေချာပါပြီ”ဆိုပြီး ရင်ဘတ်ကို ဖိဖိနေတယ်။ ကျွန်မကတော့ ငိုတုန်းပဲ။ နောက်တော့လည်း မောလွန်းလာလို့ ဘယ်သူမှ မချော့ရဘဲ ကျွန်မ အငိုရပ်သွားပါတယ်။
သရက်ပင်ပေါ်က အဲဒီအရာလေးက တစေ်္ဆပဲလား။ လူကြီးတွေပြော သလို နာနာဘာဝ သရဲသဘက် ဆိုတာပဲလား။ ကျွန်မ မသဲကွဲဘူး။ ဒါပေမဲ့ တကယ်မြင်ခဲ့လို့ တကယ်ရှိတယ်လို့တော့ ကျွန်မလက်ခံလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ကျွန်မကို အဘွားတို့ထင်မြင်သလို ဒုက်္ခပေးတာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်မ စိတ်ကိုတောင် ရွှင်မြူးစေခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒါလေးဟာ သရဲ သဘက်လေး ဖြစ်တယ်ဆိုဦးတော့ကျွန်မသူ့ကို ချစ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးကို နောက် တစ်ကြိမ်တွေ့မြင်ချင်ပါသေးတယ်။
ညဘက် လူကြီးတွေအလစ်မှာ ခိုးပြီး ခြံထဲက တခြားသစ်ပင်တွေဆီ လိုက်ကြည့်ပေမဲ့ အဲဒါလေးကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ တစ်ညတော့ ကျွန်မ အိပ်မက်ထဲ အဲဒါလေး ရောက်လာပါတယ်။ အပြင်မှာတုန်းကလိုပဲ သူ့ဆီက ထွက်ကျလာတဲ့လျှာကြီးနဲ့ ကျွန်မဆော့ပါတယ်။ ဆော့ရုံသာမက သူ့လျှာကြီး နဲ့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို ပတ်ခေါ်သွားတာ ကျွန်မ ကောင်းကင် အမြင့်ကြီး ကိုရောက်ဖူးသွားတယ်။ ကြယ်တွေနဲ့ စကားပြောခဲ့ရတယ်။ တိမ်တွေပေါ်မှာ လည်း တက်ထိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ “မင်းအဘွားကို ငါကြောက်တယ်”လို့ ပြောပြီး သူက ကျွန်မကို အိပ်ရာထဲအထိ ချောချောမောမော ပြန်ပို့ပေး ပါတယ်။
ဒီအိပ်မက်လေးက ကျွန်မစိတ်ကို တအားကို ရွှင်မြူးစေပေမဲ့ ဒီတစ်ခါ အဘွားအပါအ၀င်လူကြီးတွေကို ပြန်ပြောပြလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါလေး မလာနိုင်အောင်ဆိုပြီး သရက်ပင်ကြီးကို ဖျက်ဆီးပစ်သလိုမျိုး ကျွန်မ အိပ်မက်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ကုန်မှဖြင့် ခက်ရချည့်။ အိပ်မက်တွေကို သရက်ပင်ခုတ်လှဲသလို ခုတ်ထစ်ဖျက်ဆီးပစ်လို့မရဘူး လို့တော့ ကျွန်မ ယုံပါတယ်။
တစေ်္ဆလို့တိတိပပပြောနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကို ကျွန်မ ပထမဆုံးမြင်ဖူးတာ လေးတန်းကျောင်းသူအရွယ်ကပါ။ ကျွန်မတို့ တစ်အိမ်သားလုံး မန်္တလေး သွားကြတယ်။ ဘာကိစ်္စနဲ့သွားတယ်တော့ ကျွန်မ မမှတ်မိပါဘူး။ တစ်လ လောက် ကြာခဲ့တယ်။ ပြန်လာတော့ အိမ်ရှေ့မှာ မြင်းလှည်းရပ်ပြီး လူကြီး တွေက ပစ်္စည်းတွေချသူချ၊ မြင်းလှည်းခ ရှင်းသူရှင်း အလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း အိမ်ထဲပြေးဝင်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ အချစ်တော် ခွေးကလေး “မဲတူ”ရဲ့နာမည်ကို အော် ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့။
တံခါးတွေမဖွင့်ရသေးတော့ အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံး မဲကြုတ်နေပါတယ်။ မဲတူကို ခြံဝင်းထဲအဆင်သင့်မတွေ့ရလို့ အိမ်မကြီးကနေ နောက်ထဲပြေးဝင် ပြီး သူရှိနေတတ်တဲ့ ပစ်္စည်းဟောင်းတွေသိုလှောင်တဲ့အခန်းဆီ ကျွန်မ သွားပါတယ်။ လက်စသတ်တော့ မဲတူက ကျွန်မတို့ကို မကြိုအားဘဲ အိပ်မောကျနေတာကိုး။ ကျွန်မက “မဲတူမဲတူ အို့အို့”လို့ အသံပြုရင်း လက်ထဲ က စားလက်စ အသားကင်လုံးလေးတွေကို အိတ်ထဲကနေ အကုန်ဖောက်ချပြီး ကျွေးလိုက်တော့ ချက်ချင်းထလာပြီး စားနေလိုက်တာ။ ကျွန်မခြေထောက်ကို တိုးခွေ့လိုက် စားလိုက်နဲ့၊ ကျွန်မလက်နဲ့ သူ့ခေါင်း လေးကို ပုတ်လိုက်တော့ ကုပ်ကလေးကို ပုအိုက်ခွက်ဝင်သွားတာပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မလက်ခုံကို သူ လျှာနဲ့လျက်တယ်။ အဲဒီအခိုက်မှာပဲ မေမေက စိတ်မော လူမောသံကြီးနဲ့ ကျွန်မအနားရောက်လာတယ်။
“ဟဲ့သမီးရယ် ဘာလို့အသားလုံးတွေ ပစ်ချနေတာလဲ”
“ဟင် မေမေ ကလဲ ဒီမှာ မဲတူကိုကျွေးတာလေ”
မေမေက မျက်စိမျက်နှာ အပျက်ပျက်နဲ့ ကျွန်မကို ကပျာကယာ ကောက်ချီပြီး အိမ်ပေါ်ခေါ်သွားတယ်။ နောက်မှ ခြံစောင့်ကြီးပြောလို့ သိရ တာက မဲတူက ကျွန်မတို့ ရောက်မလာခင် နှစ်ရက်က သေသွားခဲ့ပြီတဲ့။ အိမ်သားတွေမမြင်တော့ ထမင်းလည်းမစား၊ ဘာမှလည်းကျွေးမရနဲ့၊ နောက်ဆုံး ခြံဝင်းထောင့်မှာ ခွေခွေလေး အသက် ထွက်နေတာနဲ့ အဲဒီနေရာမှာပဲ မြှုပ်ထားလိုက်တယ်တဲ့။ ခြံစောင့်ကြီးက တစ်အိမ်လုံးရဲ့အားကိုးရတဲ့ လူယုံ ကြီးပါ။ သူညာမပြောဘူး ဆိုတာ ကျွန်မ ယုံပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သေချာတာက ကျွန်မနဲ့တွေ့ခဲ့တာ တစေ်္ဆမဲတူပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။
“မဲတူကို တကယ်တွေ့ခဲ့တာပါ။ သူ့ခေါင်းကိုတောင်ပုတ်လိုက်သေး။ သူက ကျွန်မလက်ကို လျှာနဲ့တောင် လျက်လိုက်သေး”လို့ ကျွန်မက အသေအချာပြောပြတာကို ဘယ်သူမှ လက်မခံကြဘူး။ တွေ့ကရာ ရှစ် သောင်း လျှောက်လျှောက်မပြောစမ်းနဲ့တဲ့။ ပြီးတော့ လုပ်ပြန်ပြီ။ ကျွန်မကို ပရိတ်ရွတ် ထားတဲ့ ရေဆိုလားဘာလား အတင်းတိုက်တယ်။ မဲတူနဲ့တွေ့တယ် လို့ နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မပြောရဘူးလို့ တားမြစ်တယ်။ မပြောနဲ့ဆို လည်း မပြောဘဲ နေရုံပဲပေါ့။ တွေ့တာကတော့ တွေ့တာ အသေအချာပါပဲ။
ဒီအကြောင်း အတန်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတော့ သူငယ်ချင်း တွေက ယုံတာမယုံတာထက် ကြောက်ဖို့ရှုထောင့်ကပဲ ပြောနေကြတယ်။
“နင်တို့အိမ်မှာ ခွေးတစ္ဆေရှိတယ်၊ ငါတို့မလာတော့ဘူး” တဲ့။
နောက်တစ်ခါ ကျွန်မ ဒန်းစင်လေးမှာ ဒန်းစီးနေတုန်း ကျွန်မ ခြေထောက် အောက်ကနေ မဲတူ လျှိုဝင်လာတယ်။ ကျွန်မ ဖိနပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီး ခြေဖျားလေးနဲ့ သူ့လည်ပင်းကို တို့တို့ပြီး ပွတ်သပ်ပေးတော့ ခေါင်းလေးမော့၊ မျက်လုံးလေးကိုမှေးပြီး ဇိမ်ခံနေလိုက်တာ။ ကျွန်မ မျက်စိထဲက ထွက်ကို မထွက်တော့ဘူး။ ကျွန်မနဲ့မဲတူနဲ့ ပြေးလွှားကစားကြတယ်။ အကြာကြီးပဲ။ “သမီးတစ်ယောက်တည်း ဘာလို့အရမ်းပြေးနေတာလဲ”
မေမေက လာတားတယ်။ မေမေလည်းလာရော မဲတူက ထွက်ပြေး သွားတယ်။
“တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊ မဲတူနဲ့ မီးနဲ့ ဆော့နေတာ”
ကျွန်မကို မေမေက သနားစရာသတ္တ၀ါလေးလို ကရုဏာ တနင့်တပိုး ကြီးနဲ့ ငုံ့ကြည့်လာတယ်။ သေချာတယ်။ မေမေကျွန်မကို မယုံဘူး။ ကျွန်မကတော့ မဲတူသေသွားပေမဲ့ ကျွန်မအနားမှာ အသေအချာရှိတယ်လို့ လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ မဲတူရဲ့လည်ကုပ်ကို ထိုးဖွထားတဲ့ ကျွန်မခြေချောင်း ကြားလေးတွေမှာ သူ့ဆီကကျွတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ အမွေးမည်းမည်းလေးတွေ၊ ပြီး သူ့ကို ချီပွေ့သေးတာကြောင့် ကျွန်မအင်္ကျီရင်ဘတ်မှာလည်း ကပ်နေတဲ့ အမွေးလေးတွေအများကြီးပဲ။ ကျွန်မ တစ်ဖက်သတ်ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်တာပါလို့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရတဲ့ သက်သေအစစ်တွေပါ။ တစေ်္ဆ တကယ်ရှိတာ ကျွန်မယုံသလို တစေ်္ဆတွေကို ကျွန်မချစ်တာ တကယ်ပါ။
တစ်ခါကတော့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ရက်အတွင်းမှာ ဖေဖေခရီးသွားနေ ခိုက် ကျွန်မတို့မြို့ကလေးမှာ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေတဲ့ တီးဝိုင်းကားကြီးတွေ နောက် ကျွန်မတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက် လိုက်ကြည့်ကြတယ်။ လူတွေအရမ်း များလို့ မတိုးနိုင်မှန်းသိလို့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကပဲကြည့်ကြဖို့ စိတ်ကူးထားပေမဲ့ မရည်ရွယ်ဘဲ ကျွန်မတို့တီးဝိုင်းကားအနားအတင်းတိုးမိပြီး အစ်မနဲ့ကျွန်မ လူချင်းကွဲသွားပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်မှာ လူအုပ်ထူထူကြီးပိတ်နေတယ်။ ခက်တာက ငြိမ်ပြီးရပ်နေလို့လည်းမရဘူး။ သူတို့နဲ့အတူ လိုက်ရွေ့ပေးနေ ရတော့ ဘယ်နားရောက်လို့ ရောက်မှန်းလဲမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီမှာ သာမန်လူတွေ ထက် ခေါင်းတစ်လုံးပိုထူးပြီး မြင့်နေတဲ့လူ တစ်ယောက်ကို ကျွန်မနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ ဘွားခနဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ ရုတ်တရက် သူက လှည့်ကြည့်ပြီး ကျွန်မကို ပြုံးပြတယ်။ ဟင် . .ကျွန်မတို့ အိမ်က အဖေ့ကားမောင်းပေးတဲ့ ဒရိုင်ဗာ ဦးထွေးကြီး။ သူက အဖေနဲ့အတူ ခရီးထွက်သွားတယ်မို့လား။ ပြန်ရောက်နေပြီလား၊ ပြန်ရောက်ရင် အဖေလည်း ပြန်ရောက်ပြီပေါ့။ မဟုတ်သေးပါဘူး လူတူတာဖြစ်မှာ။ အတွေးတွေနဲ့ ကျွန်မ သူ့ကို မသိသလိုနေလိုက်တယ်။ သူက မရဘူး။ ကျွန်မ ဘက်ကို လှမ်းလှမ်းပြီး ငုံ့ငုံ့ကြည့်တယ်။ လူတွေကို ဆန့်ကျင်ပြုပြီး ကျွန်မ ဘက်ကို တိုးလာနေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို သေချာကြည့်ပြီး
“မီးမီး လာ ဒီဘက်ကိုလာ”တဲ့၊ လက်ယပ်ခေါ်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ လူမှားတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကျွန်မကို အသေအချာခေါ်နေတာ။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း သူခေါ်ရာဘက်ကို အတင်းတိုးဝှေ့ လိုက်သွားတယ်။ သူက မီးမီးလာ လို့ ခေါ်လိုက် သူ့ဆီကို ကျွန်မက အတင်းလိုက်သွားလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး ဘွားခနဲ ကျွန်မအစ်မကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကျွန်မပျော်သွားတယ်။ “အမလေးခေါင်းနားပန်းကိုကြီးထွက်သွားတာပဲ၊ နင်ဘယ်ပျောက်သွား တာလဲ၊ ဘာလဲဟာ ငါ့လက်ကိုမှ မတွဲထားတာ”
အစ်မရဲ့ပြစ်တင်သံကို ကျွန်မ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ကျွန်မမျက်လုံးတွေက ဦးထွေးကြီးကို လိုက်ရှာနေမိတယ်။ သူ ဘယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်။ လွှတ်ခနဲ အစ်မကို မေးမိတယ်။
“ဦးထွေးကြီး ရော . .”
“ဟဲ့ ဘာကြောင်နေတာလဲ၊ သူအဖေနဲ့ပါ သွားတယ်လေ”တဲ့။ ကျွန်မ စိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါနဲ့။ ဘာကိုယုံရမှန်းမသိဘူး။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တယ်လီဖုန်းဝင်လာတယ်။ အဖေတို့ကားမှောက် လို့တဲ့။ အဖေတော့ ပွန်းပဲ့နာကျင်ရုံပဲတဲ့။ ဒရိုင်ဘာဦးထွေးကြီး ဒဏ်ရာအပြင်း အထန်ရပြီး မြစ်ကြီးနားဆေးရုံပေါ်မှာဆုံးသွားပြီတဲ့။ အခုမှပဲ ကျွန်မရှင်းသွား တယ်။ ကျွန်မတို့လူချင်းကွဲတုန်းက အစ်မနဲ့ပြန်တွေ့အောင် တဖြည်းဖြည်း လက်ယပ်ခေါ်ပြီး တစေ်္ဆဦးထွေးကြီးက လမ်းပြပေးခဲ့တာပါ။ ဟုတ်သားပဲ။ တကယ်ဆို သူကအရပ်သိပ်မြင့်လွန်းလို့ ကျွန်မလိုကလေးလေးက သူ့ကို လှမ်းမြင်တယ်ဆို ထားပါတော့၊ သူက အခုလို လူတွေကြားထဲပုညပ်နေတဲ့ ကျွန်မကို ဘာလှမ်းတွေ့စရာအကြောင်းရှိမှာလဲ၊ တစေ်္ဆမို့လို့သာ လူတွေ ပိတ်ကာနေတဲ့ ကြားကနေ ကျွန်မကို သူကောင်းကောင်းကြီးမြင်ခဲ့တာပေါ့။ အဘွားသံသယ ရှိသလို တစေ်္ဆဟာ ကျွန်မကို ဒုက်္ခပေးဖို့မဆိုထားနဲ့ ကျွန်မ လူအုပ်ထဲညပ်ပြီး ဒုက်္ခတွေ့နေလို့တောင် ကူညီလမ်းပြပေးခဲ့သေးတာပါ။ ဒါကြောင့် တစေ်္ဆဆိုတာ ကျွန်မအတွက် ကြောက်စရာမဟုတ်ဘဲ ချစ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ ခုနစ်တန်းအရွယ်မှာ သီချင်းဂီတကို သိပ်ခုံမင်တဲ့မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် သူငယ်ချင်း သဲမာက ကျွန်မ ကို သူတက်နေကျ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ခေါ်သွားတယ်။ ဂစ်တာအတီး သင်ပေးတယ်၊ နောက်ပြီး ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ အလှူငွေထည့်ဝင်တတ်ဖို့လည်း သင်ပေးခဲ့တယ်။ သူက ကျွန်မရဲ့အချစ်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ။ ၀ါသနာချင်းတူသလို စိတ်သဘောထားချင်းလည်း ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အင်္ကျီဆင်တူ၊ ဖိနပ်ဆင်တူ၊ ဦးထုပ် ဆင်တူ၊ ဘာကိုမဆို အတူတူ လုပ်လို့ရတာတွေ အကုန်အတူလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ကျောင်းကပွဲမှာ သူနဲ့ကျွန်မီကနအသီချင်းအတူဆိုတာ အားလုံးရဲ့ချီးကျူးမှုကိုရခဲ့တယ်။
တစ်နေ့နံနက်မှာ သဲမာ မရှိတော့ဘူးလို့ သဲမာအစ်ကိုက ငိုသံပါကြီးနဲ့ ကျွန်မကို အစောကြီးလာပြောတယ်။ “ဟင် ဘယ်သွားလို့လဲ”လို့ အလိုက် ကမ်းဆိုးမသိ ကျွန်မက မေးလိုက်မိသေးတယ်။ သွေးဖြူဥနှုန်းတွေ တရားလွန် တက်နေခဲ့တာ၊ သွေးကင်ဆာနဲ့ သဲမာဆုံးပြီတဲ့။ အိမ်ကို လိုက်သွားတော့ အနီရောင်နှင်းဆီပွင့်တွေတစ်ကိုယ်လုံးအပြည့်ခြုံလွှမ်းထားတဲ့ သဲမာကို အဖြူ ရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအရမ်း ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သရက်ပင်ကြီးသေတုန်းကလို စူးစူးဝါးဝါး အကြာကြီးအော်ငိုပစ်ချင်ပါတယ်။
ထူးဆန်းတာက ကျွန်မမျက်ရည်တွေကို ဘယ်အရာက ထိန်းချုပ် ထားသလဲမသိပါဘူး။ အားကြီးတဲ့လက်တစ်စုံက ကျွန်မရဲ့ တုန်ယင်နေတဲ့ ပခုံးတွေကို ပွေ့ပိုက်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးနေသလိုပဲ။ အဲဒါ သဲမာပြောဖူးတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ခိုးပါတဲ့လက်တစ်စုံလား။ သဲမာရဲ့အမေက ကြေကွဲနေတဲ့ ကြားက ပြုံးပြီး ကျွန်မကိုပြောတယ်။
“သဲမာက အခု ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာ ၀င်စားနေပြီ၊ မီးမီးကို သဲမာစောင့်နေမှာပါ၊ မီးမီးခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင် သဲမာနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ပြန်ဆုံရမှာအသေအချာပဲ” တဲ့။ ကျွန်မ ပျော်သွားတယ်။
“ကျွန်မတို့ အခုလိုပဲ ဘာမဆို အတူလုပ်လို့ရမှာလားအန်တီ”
“အတူပေါ့၊ ဘာမဆိုအတူ၊ ကောင်းကင်ဘုံမှာ အားလုံးအတူတူပဲ၊ အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေအတွက် ဘုရားသခင်က တစ်ခန်းတည်းနေလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားမှာ”
ဒီလိုဆိုမှဖြင့် သဲမာသေတာ ဘာအထွေအထူး ၀မ်းနည်းစရာရှိလို့လဲ။ အိမ်ကိုပြန်လာတော့ အဘွားက ဆတ်ဆတ်ခါခါလေသံနဲ့ပြောတယ်။ “အိမ်ပေါ်မတက်နဲ့ဦး၊ ရေချိုးခန်းထဲ နောက်ပေါက်ကလှည့်ဝင် ရေအရင် ချိုးချ”
အသုဘအိမ်က ပြန်လာလုိ့ပြောတာပါ။ တစ်ဆက်တည်း ခေါင်းလျှော်ဖို့ ပါ လှမ်းပြောရင်း စဉ်းစားမိဟန်နဲ့မေးတယ်။
“နေစမ်းပါဦး၊ ဦးထုပ်ကဘယ်မှာလဲ ဦးထုပ်ပါလျှော်ပစ်”
“ဦးထုပ်ကျန်ခဲ့တယ်၊ ဟိုအိမ်မှာ”လို့ အော်ပြောလိုက်တယ်။ အဘွားက ကျွန်မကို မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပဲ။ အဘွားကို ချစ်တာမှန် ပေမဲ့ အရွယ်လေးရောက်စပြုလာတော့ အရင်ကလို ကိုယ့်ဆန်္ဒ မပါဘဲ အဘွားပြောသမျှ လိုက်လိုက်လုပ်ရတာမျိုး မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်အယူ အဆနဲ့ကိုယ်ပဲ လွတ်လပ်စွာနေချင်ပါပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ
“မချိုးတော့ မလျှော်တော့ ဘာဖြစ်မှာလဲအဘွား”
ခါခနဲနေအောင် ခေါင်းကို ယမ်းခါပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ကျွန်မ အိမ်ပေါ် တက်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရာပေါ် ပစ်လှဲ အိပ်လိုက်ပြီးမှ ပြန်ထထိုင်ပြီး ဂစ်တာ ကောက်ကိုင်မိတယ်။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မသိလိုက်ခင်မှာပဲ နှုတ်က အလို အလျောက် သဲမာနဲ့ဆိုနေကျီကနအသီချင်းလေး ဆိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆိုနေရင်းနဲ့ ဒုတိယဠနမျန မှာ သဲမာတကယ်ပဲ ၀င်ဆိုပေးခဲ့တယ်။ ဟိုဟိုသည်သည် ကြည့်တော့ အို . . .သဲမာပါလား။ ပြတင်းပေါက် ဘောင်ပေါ်မှာ ခြေတွဲလွဲချ ထိုင်နေတဲ့ သဲမာ။ အခါတိုင်းတစေ်္ဆတွေလို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မဟုတ်ဘဲ နီးနီးကပ်ကပ်လေးအခန်းထဲမှာ မြင်ရတော့ မကြောက်ပေမဲ့လည်း အံ့သြလွန်းတဲ့စိတ်နဲ့ မှင်တက်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း စောစောကအသုဘက အိပ်မက်မက်နေတာ၊ အခုဟာမှ တကယ့်အဖြစ်။ သဲမာကဖြင့် မသေပါဘူး လို့ ကယောင်ချောက်ချား တွေး လိုက်မိတယ်။
“နင့် ဦးထုပ်ကျန်ခဲ့လို့ လိုက်ပေးတာ၊ ရော့”
သဲမာက လှမ်းပေးတယ်။ ကျွန်မ ထိုင်နေရာက ထယူတာ မရဘူး။ အားယူရုန်းထပြီး သွားယူလိုက်တော့ သဲမာက တခစ်ခစ်ရယ်ပြီး ဦးထုပ် လေးကိုင်လို့ အခန်းထဲ လှည့်ပတ်ပြေးနေတယ်။ ကျွန်မ ခေါင်းမူးလာတယ်။
“နင် ငါ့ကို ကြောက်နေပါတယ်”
အဲဒီလို သဲမာပြောတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မဖြေရှင်းချင်ပေမဲ့ အသံက ထွက်မလာဘူး။
“ဒါဖြင့်လည်း နောက် မလာတော့ပါဘူး၊ ကောင်းကင်ဘုံကနေ နင့်ကို စောင့်နေမယ်၊ နင်လာမယ်မို့လား”
ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်မခေါင်းပေါ်ကို ဦးထုပ်လေး ဆောင်းပေးသွားပြီး လှစ်ခနဲပျောက်သွားတယ်။ သဲမာလှုပ်ရှားပုံက မြန်ဆန်လွန်းအားကြီးလို့ ကျွန်မ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ပဲ ဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်။ အတန်ကြာမှ အသံလေးတုန်တုန် နဲ့ အော်မိတယ်။
“သဲမာ သဲမာ နင်ရှိသေးလား”
သူ ကျွန်မအခန်းရဲ့တစ်နေရာရာမှာ ရှိနေဦးမှာပါ။ သူဆွတ်နေကျ ရေမွှေး နံ့လေးက တစ်ခန်းလုံးသင်းပျံ့နေဆဲပဲ။ ဟုတ်တယ် သူ သဲမာ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်မ သူ့ကို ကြောက်နေတယ်ထင်လို့ သူ ကျွန်မ မြင်အောင်မပြတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မ ရိပ်စားမိလိုက်တယ်။ သူ မေးတာ ကျွန်မ မဖြေလိုက်ရဘူး။ ခုမှပဲ ၀မ်းနည်းဆို့နင့်လာတယ်။ ကျွန်မ ခုမှ ထိုင်ငိုမိတယ်။ တအိအိငိုသံကြား လို့ အဘွားက အပေါက်ဝကနေ လာကြည့်တယ်။ ခေါင်းပေါ်က ဦးထုပ်ကို မြင်တော့ မျက်မှောင်ကြီးကွေးရှုံ့နေအောင် အတင်းတွန့်ထားပြီးပြောတယ်။
ကျွန်မက အမှန်အတိုင်းဖြေတာပါ။ အဘွားက ပခုံးတွေတွန့်ပြပြီးလှည့် ထွက်သွားတော့မလို ဟန်ပြင်ပြီးမှ နှာခေါင်းကို ရှုံ့ရှုံ့ပွပွလုပ်ပြီးမေးပြန်တယ်။
ကျွန်မ စကားလည်းဆုံးရော အဘွား ပါးစပ်ပိတ်ပြီး တစ်ကြိုးတည်း လစ်ရော။
သဲမာရဲ့အလောင်းမြေချတဲ့နေ့က ဟိုနေ့တုန်းဆီက မဖြေလိုက်ရတဲ့ စကားကြွေးကို ကျွန်မ ပြန်ဆပ်လိုက်ပါတယ်။ မြေကြီးခဲတချို့လက်နဲ့ကုပ်ယူ ပြီး သဲမာအလောင်းပေါ် အသာလေးပစ်ချလိုက်ရင်း ကတိပြုလိုက်တယ်။
“တို့အတူပြန်တွေ့ကြစို့၊ ငါလာခဲ့ပါ့မယ် သဲမာ”
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကို မထင်မှတ်ဘဲ ဆပ်ခဲ့တဲ့စကားကြွေးက ကျွန်မ ဘ၀ကို အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ရွာကလေးကို စွန့်ခွာပြီး မြို့ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်မငှားနေတဲ့အဆောင်နားက သမ်္မာကျမ်းစာသင် ကျောင်းမှာ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကချင်အမျိုးသား ကိုနော် အောင်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ ကျွန်မ ခရစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ပါပဲ။
"မေမေယုံပါတယ် သမီးရယ်၊ မေမေလည်းပဲ .... "
သူတို့မျက်လုံးတွေ ကို တစ်ဦးချင်းလိုက်ငေးကြည့်ရင်း ကျွန်မ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်ပစ်လိုက်ရတယ်။
တစ္ဆေတွေက ကျွန်မရဲ့ ပျင်းရိနေတဲ့စိတ်ကို ပျော်တော်ဆက်ပေးတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖျော်ဖြေရေး သမားတွေဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ကိုယ်ရေ အထီး ကျန်ပြီး ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ နာရီတွေကို စိုလက်တောက်ပအောင် အဖော်ပြုပေးတယ်လို့ ကျွန်မယုံတယ်။ ဘ၀မှာ ရှေ့လျှောက် ဘယ်လို တစ္ဆေမျိုးမြင်ရဦး မလဲလို့ ကျွန်မ ရင်ခုန် မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။
(နွယ်နီ မဂ္ဂဇင်း ၂ဝ၁၂ ဇွန်လ)